Kusukela ezikhathini zasendulo, abantu unamathisele okukhulu ukubaluleka izimbali. Namuhla ungezwa kusihlwa, abesifazane baxoxe izingubo - omunye imibala. Othile kuziwa amehlo akho, umuntu slimmer, umuntu igcwalisa. Cabanga Chivalry, zichaza ngokuningiliziwe enkulu izingalo kwezicebi, ezo, lapho Umbala obomvu wenziwa. Paints abonisa isimo sabo emphakathini, uhlanga, ingcebo, ngobunjalo babo. Ikakhulukazi uthande umbala bomvu noma nsomi, ke wakhomba ubukhosi. Yini umele obomvu umbala eRussia? Sine namafulege abomvu iholide, umugqa obomvu, futhi izinsuku zekhalenda.
Ezinye izizwe umbala izingubo kungacacisa ukuthi lombhalo yomuntu, ukukhula abaqeqeshi siqu bathi unganakile siluthola lombhalo zabo bese ukhetha izingubo zakhe.
Yini ebomvu umbala
ERussia, ungathola izinkulungwane ukutolika. Through the umbala obomvu esiteji show uthando namandla, njengegazi jackets kwakusho intsha asebenzayo abakghona uhola. Le ntombazane kule ingubo ebomvu edonsela ngokuzenzakalela ukunakwa, kulindelekile ukufudumeza kanye uhlamvu ashisayo.
Red kusho iholide, akumangalisi siba izinsuku zekhalenda abomvu. Abokhokho bethu esebenzisa igama elithi elibomvu futhi enhle njengoba omqondofana, khumbula ibinzana "obomvu ilanga", "Intombi fair". Futhi, lokhu umbala elifanekisela uthando, ngoba amakhadi umbala ngesimo senhliziyo ngoSuku Valentine sika? Uqinisile - abomvu! Futhi bathandekayo, njengoba umthetho, nika red roses!
Zonke nimbonile, ngisho nalawo ahlala kwelinye izwe. Phakathi izimbali abe bomvu. Imibala ku ifulegi Russian Federation sitolikwa ngezindlela ezahlukene. Kukhona amahlaya ehlukene imibala ngekhodi Igama lenhlangano edume wama-KGB - obomvu, oluhlaza, omhlophe. Ngokusemthethweni, lezi imibala neze kuhunyushwa. Kodwa kukhona ukubukwa okungenani ezintathu ezimisiwe. On the red lokuqala kusho wekuba sive ka-Motherland yethu, emhlophe - kungcono zenkululeko nokuzibusa, futhi umbala oluhlaza okwesibhakabhaka Virgin. Ngokusho umbono wesibili, imibala ifulege amelela ubunye amagatsha amathathu esizweni esisodwa. Red kusho Omkhulu abaseRussia, blue - nomhlophe Little Russia - Belarus. Ngokombono lwesithathu, obomvu - lena, futhi, amandla, amandla wombuso kanye igazi elachithwa ku izimpi eziningi.
umbala izimpawu ngezinye izikhathi isimanga. Ngaphambili, obomvu kwaba umbala yamakhosi, ekhulwini lamashumi amabili kwaba umbala omusha, inkululeko futhi igazi. Khumbula ifulegi Okthoba Revolution, libomvu, futhi igazi ukuze leli fulegi agelezé emfuleni. Nalapha futhi, ukukhumbula anecdote lapho Chapaev wagqoka ihembe elibomvu, empini ayengekho igazi ebonakalayo.
Yini ebomvu umbala ezempi Russian, kungashiwo - igazi. Ezinye amayunithi lempi babe le ndondo njengoba Guards ifulege. He is elibomvu legazi nokuphila emabuthweni yilesi sigaba, okwakubonisa injongo yayo kuze kube sekupheleni. Uma ukufunda umlando wawo ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, banner Labaqaphi engatholi ukwahlukana, futhi izinsalela zabo ngemva ngezihluthu, Imiphumela kusukela imvelo, angenze isitha.
Kusho ukuthini ngoba umbala obomvu ezempi, usuvele ukuqonda. Conscript, lashayisa Guards iyunithi, uyaqaphela ukuthi kukhona okungahambi kahle. Isiphathamandla, izinkontileka abanye ababuthiwe kukhona ifulege encane ebomvu phezu kwesifuba, ngesikhathi Marine Corps, yena eboniswa ngomunye. Kulezi amabutho baziqhenya kakhulu emlandweni wabo, imfundamakhwela iqala ukuhlonipha amabutho ahlomile futhi ihlose ukuthola Unelungelo lokugqoka umaka obomvu esifubeni. Babehlukile emlandweni lapho Labaqaphi banner wanika division elalisanda kumiswa, kodwa ikakhulu kwaba amayunithi armored we imishini emisha yesimanje, ngokushesha zahileleka enkundleni yempi, futhi emathangini avuzayo akahlalanga sikweletu owenzelwe sona yikhotho.
I obomvu umbala amabutho kwamanye amazwe
Manje umbala obomvu isetshenziswa kuphela ingubo iyunifomu, emkhakheni ngaphansi ithoni efanayo kuzo zonke izindawo. Izimpawu zalesi umbala amasosha ocacile - igazi futhi isinqumo ukuya ekugcineni. ICarthage amaqhawe egqoka izingubo onsomi ngaphambi kwempi, ayizange amsindise iRoma ikuyo yonke indawo, kodwa ungeze enkazimulweni. ISparta babegqoka izingubo ezibomvu, futhi khumbula labo namanje (isibonelo, ifilimu mayelana iSparta ezingamakhulu amathathu, lapho ugcine ukuvikela Thermopylae, bese ukulwa ne namaPheresiya olwandle). EChina, futhi, uthande le umbala futhi babe ophikweni amagama amasosha obomvu, nezilo obomvu, nokunye. D.
Yini ebomvu umbala eRussia? Yebo, into efanayo emhlabeni wonke, ngaphandle umbala benzuzo. Mhlawumbe isizathu siwukuthi abesifazane baye eside amakhosi angishiyile, ngisho nokukhanya abongameli uncamela jackets amathoni amnyama. Ngiyaqiniseka umbala amandla futhi ukuphila, bese uya eholidini division of energy, injabulo, ubuhle nokufutheka, amandla kanye othile wachitha igazi.
Uzosebenzisa izingubo zabo ebomvu - ungamangali ukuthi abantu baguquke, ikakhulukazi uma uyintombazane. Nakuba izibani ezibomvu ngokusemthethweni wawuvinjelwe e-Russia, wonke umuntu uyazi ukuthi asho ukuthini. Kungakhathaliseki ukuthi izazi zokusebenza kwengqondo uthi, obomvu akuyona nje kuyacasula.
France, Toulouse: incazelo, izivakashi kanye nokubuyekeza